Auto Android, 5ta tabaha ugu fiican | Androidsis
Nidaamka macluumaadka iyo madadaalada ayaa noqonaya qayb muhiim ah marka aan baabuur wadno Android Auto waa codsi kasbanaya taageerayaal badan noqoshada kuwa ugu badan ee kumbuyuutarka ku dhexjira gaariga, kiiskan oo leh taleefankeena casriga ah si uu ula falgalo barnaamijyada kala duwan.
Qalabkan waxaa hadda looga faa'iideysan karaa xeelado iyo toobiyeyaal kala duwan, siinta Android Auto nolol badan haddii aadan inta badan isticmaalin marka laga reebo safarada masaafada dheer. Waxaa ka mid ah inay awoodaan inay hubiyaan qiimaha shidaalka, ka bilow bilowga otomaatiga ee Android Auto iyo toobiyeyaal kale
1 Dib-u-dejinta Android Auto
2 Bilow Khariidadaha Google
3 Hubi qiimaha xarumaha gaaska ee u dhow
4 Fur Spotify
5 Hubi codsiyada la jaan qaada Android Auto
Dib-u-dejinta Android Auto
Android Auto wuxuu noo ogolaanayaa isla marka aan fuulno gaariga si toos ah u furaya, dhammaantood adigoon ka raadin taleefankeena. Bilowga otomaatigga ee 'Auto Auto' waa mid ka mid ah xulashooyinka ay ahayd in aan dhaqaajinno si aan ugu raaxaysanno safarro gaagaaban ama haddii aad u guureyso meel ka baxsan magaaladaada.
Tallaabooyinka la raacayo si loo dhaqaajiyo waa: Fur menu-ga dhinaca arjiga adigoo gujinaya saddexda xargo oo toosan, tag Settings, hadda hel goobaha shaashadda Telefoonka oo guji billowga otomaatiga. Doorashadan gudaheeda waxaad ku dooran kartaa midka si toos ah u bilaabaya marka uu ku xiran yahay Bluetooth ama midka bilaabaya marka aad taleefanka kala soo baxdo jeebkaaga.
Bilow Khariidadaha Google
Mid ka mid ah howlaha muhiimka ah ee Android Auto waa in la helo Khariidadaha Google si ay u awoodaan inay ku daawadaan shaashadda nidaamka caanka ah ee loo yaqaan 'multimedia system'. Khariidadaha waa mid ka mid ah codsiyada dhameystiran ee qalabka Google Xaaladdan oo kale waa tan ay u isticmaasho Android Auto asal ahaan.
On shaashadda guriga ee "Auto Auto", guji astaanta u ekaanta dheeman iyo fallaadh lagu tilmaamay midigta, Khariidadaha Google ayaa furmi doona, laga bilaabo xilligaas waxaad u qaabeyn kartaa dalabka sida aad u jeceshahay waana mid ka mid ah waxyaabaha ay yar yahiin dadka isticmaala Android Auto maanta.
Hubi qiimaha xarumaha gaaska ee u dhow
Iyadoo la adeegsanayo Android Auto waxaa suurtagal noqon doonta in lagu hubiyo qiimaha xarumaha shidaalka ee kuugu dhowTan awgeed waa inaan u isticmaalnaa Waze, biraawsar aad ugu eg Khariidadaha Google. Waxay tilmaamaysaa saxnaanta mid kasta oo ka mid ah xarumaha gaaska, sicirka hadda jira waxayna noo geyn doontaa iyaga adoo gujinaya meesha.
Ku bilow arjiga Waze, hadda ku yaal dhinaca menu-ka marinka qaybta ku qoran Xarumaha Gaaska, waxay ku tusi doontaa kuwa kuugu dhow adoo gujinaya waxay kuu sheegaysaa qiimaha shidaalka, Diesel ama Gasoline. Waa waxtar badan haddii aad raadineyso qiimaha ugu fiican ama saldhigga shidaalka ee lagu kalsoon yahay.
Haddii aad sameysid safarro gaagaaban ama dhaadheer, waxaa ugu wanaagsan inaad yeelato nidaam multimedia ah oo bixiya muusigyo kala duwan sida Spotify. Waad abuuri kartaa liisas, dhageysan kartaa liisas horay loo qeexay ama xitaa dhageysan kartaa heeso shaqsi ah fanaaniinta aad ugu jeceshahay, halkan kaladuwanaanshuhu waa in lagu go'aansado waxa muusigga la ciyaarayo wakhti kasta.
On shaashadda weyn ee Android Auto, guji astaanta dhegaha, hada waxay ku tusi doontaa liis ay kujiraan barnaamijyadooda muusigga iyo podcasts, dhagsii midka aad rabto inaad furto, haddii aad haysato Spotify asal ahaan way fureysaa oo markaad xirto wuxuu kusii nagaan doonaa asalka si uu asal ahaan ugu furmo.
Hubi codsiyada la jaan qaada Android Auto
Android Auto wuxuu ku eg yahay codsiyada qaarkood, kiiskan waxaa ugu wanaagsan in la ogaado kuwa la jaan qaada, inbadan oo kamid ah waa lama huraan hadaad rabto inaad heysato waxa ugu fiican daqiiqad kasta. Qaarkood waxay ku yimaadaan si caadi ah, laakiin waxaa ugu wanaagsan in la doorto kuwa aad rabto oo aad u diyaargarowdo safaradaada.
Si aad u ogaato barnaamijyadan isku habboon, fur Android Auto, hadda ku jira dhinaca menu, dhagsii barnaamijyada loogu talagalay Android Auto, waxay ku tusi doontaa liistada dhammeystiran ee codsiyada iswaafajinta, halkan waxay ku tusi doontaa iyaga qaybaha ay kala duwan yihiin. Faa'iido leh haddii aad rabto inaad wax walba ka soo rogto xoqdo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Android Auto, 5ta tabaha ugu fiican